म जे बोल्छु, पूरा गर्छु – गौरी जोशी-Brtnepal.com
म जे बोल्छु, पूरा गर्छु – गौरी जोशी
आगामी एन आर एन अमेरिकाको लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डालास टेक्सस निवासी गौरी जोशीसंग गरिएको छोटो कुराकानी ।
चुनावको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
चुनावको तयारी भव्य रूपमा भइरहेको छ । न्यूयोर्कदेखि क्यालिफोर्नियासम्म निकै राम्रोरुपमा अभियान चलिरहेको छ । सबै साथीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने काम पनि भइरहेको छ । धेरै साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ । सबैले नयाँ, सिर्जनशील र गतिशील नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । हौसला दिइरहनुभएको छ । धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ । स्वतःस्फूर्तरुपमा साथीहरू अभियानमा लाग्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि अभियान चलाइरहनुभएको छ । त्यसले मलाई ऊर्जा दिइरहेको छ ।
तपाईँको उम्मेदवारी चाँहि के को लागि ?
अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूका लागि एनआरएनले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मैले एजेण्डा बनाएको छु । संस्थालाई गतिशील, पारदर्शी र एकीकृत बनाएर सबै पक्षलाई समेटेर हाम्रो एनआरएन राम्रो एनआरएन बनाउने उद्देश्य लिएको छु । एनआरएन सबैको साझा घर होस्, सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र विचारका साथीहरू समेटिउन्, सबैले मेरो भन्ने धारणाको विकास होस् भन्ने सोच मैले लिएको छु ।
अमेरिकामा मेरो सुरुवात अर्थात् चिनारी नै सामाजिक क्षेत्रबाट भएको हो, व्यवसायी भएको त धेरैपछि मात्र हो । नेपाली समाज टेक्ससमा सुरुदेखिनै सक्रिय भएँ । संस्थामा महासचिव र अध्यक्ष भएर कुशलतापूर्बक काम पनि गरेँ । नेपाली समाज टेक्ससबाट मैले सामाजिक क्षेत्रमा यहाँ के आवश्यकता छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू सिकेँ ।
तर, मैले कहिल्यै पनि आफूलाई टेक्ससमा मात्रै सीमित राखेको छैन । अमेरिकामा हुने साना ठुला सबै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, सकेको सहयोग पनि गरेको छु । त्यसैले पनि सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीको माया, सद्भाव र ऐक्यबद्धता पाइरहेको महसुस मलाई भइरहेको छ ।
त्यसो भए तपाईँका एजेण्डाहरु भनिदिनुस् न !
मसँग केही भिजनहरु छन् । आगामी दुईबर्षभित्र अमेरिकाको एनआरएनलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट योजनासहित अगाडि बढेको छु । २० हजारभन्दा बढी नेपाली भएका अमेरिकाका राज्य तथा सहरहरूमा सांस्कृतिक केन्द्र खोल्ने मेरो योजना छ । मन्दिरसहितको सांस्कृतिक केन्द्रले नेपाल र नेपालीसँग जोड्नेछ । म निर्वाचित भएको ३ देखि ६ महिनाभित्र यो कार्यलाई अघि बढाउनेछु ।
यसै गरी, एनआरएन अमेरिकामा आपत्कालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखेको छु । अहिले अमेरिकामा महिनैपिच्छे नेपालीहरू दुर्घटना वा कुनै प्रकोपबाट पीडित हुनुपरेको छ । दुर्घटनाबाट निधन हुँदा होस् या अरू कुनै कारणले उपचारमा समस्या हुँदा होस् त्यस्तो बेलामा सहयोग गर्ने कुनै स्थायी प्रकृतिको कोष छैन । जसले गर्दा पटक पटक चन्दा आव्हान गर्नुपर्ने अवस्था छ । म निर्वाचित भएपछि एकलाख डलरको आपत्कालीन कोष खडा गर्ने योजना बनाएको छु । जसबाट बिमा नभएकालाई उपचार गराउनेदेखि लिएर निधन भएकाहरुको दाहसंस्कार, सबलाई नेपाल पठाउने कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । ताकी पटक पटक चन्दा आव्हान गरिरहन नपरोस् ।
यसै गरी, स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा नभएका नेपालीहरूलाई सहुलियत दरमा त्यस्तो बिमा लिनका लागि सम्बद्ध निकायहरुसँग पहल गर्ने योजना बनाएको छु । धेरै ठाउँमा एनआरएन अमेरिका निष्कृय अवस्थामा छ । अमेरिकाकै स्थानीय संघसंस्था, निकायहरुसँग समन्वय गरेर ‘कम्युनिटी सर्भिस’ का काममा सक्रिय गराउने योजना बनाएको छु ।
अमेरिका र नेपालको स्थानीय निकायबीच मितेरी सम्बन्ध कायम गराउने योजना पनि बनाएको छु । अमेरिकाको कुनै काउन्टी र नेपालको नगरपालिका वा गाउँपालिकाबीच मितेरी सम्बन्ध कायम गराउने, दुई निकायबीच भ्रमण र अनुभव आदान प्रदान गराउने योजना बनाएको छु । यसो गर्दा अमेरिका र मातृभूमिबीच सम्बन्ध जोड्ने काम हुनेछ । दुईवर्षभित्र कम्तीमा पनि दुईवटा सिस्टर सिटी बनाउने मेरो योजना हो । सिस्टर सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा दुई देशका स्थानीय निकायबीच अनुभव, सिपको आदान प्रदान हुनेछ ।
युवाहरूलाई सक्षम बनाएर उनीहरूलाई अमेरिकामा राम्रो कमाई हुने क्षेत्रमा स्थापित गराउने योजना पनि बनाएको छु । अमेरिकामा धेरै अवसरहरू छन्, हामीले हाम्रो युवापुस्तालाई त्यसमा संलग्न गराउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । सीप विकास, नेतृत्व विकासका कार्यक्रममा अघि बढाउने योजनालाई मैले अगाडि बढाउनेछु ।
अमेरिकामा झन्डै एकहजारको हाराहारीमा नेपाली डाक्टर र नर्सहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि एनआरएनको मुभमेन्टमा सक्रिय बनाउने मेरो योजना छ । बिमा, कर दाखिला लगायतका दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्यहरुका लागि दक्ष नेपालीहरू तयार गर्ने योजना पनि छ । सबै मान्छेले सबै काम गर्न सक्दैनन्, त्यसो हुँदा यस्तो कार्यका लागि नेपालीहरू धेरै भएका सहरहरूमा तालिम दिने योजना पनि मैले बनाएको छ ।
खेलकुद तथा अन्य सिर्जनात्मक काममा नेपाली युवा साथीभाई अगाडि बढाउने सोच लिएको छु । तर, यी सबै तपाईँहरूको माया, सदभाव र ऐक्यबद्धताले मात्र सम्भव छ, जुन मैले अहिलेसम्म पाइरहेको छु । र, आगामी दिनमा पनि पाउने आशा छ ।
तपाईँ जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
मलाई भाषण गर्न आउँदैन्, धेरै बोल्ने स्वभाव पनि छैन । जे बोल्छु त्यो पूरा गर्छु । उल्टोपाल्टो गर्ने मान्छे होइन म । सानैदेखि यही सिकियो । एनआरएनलाई कुन ठाउँमा पु¥याउने, यहाँका नेपालीहरूको चाहना के छ भन्ने राम्रो जानकारी छ मलाई ।
पूर्बीतटदेखि लिएर पश्चिमसम्मका नेपाली दाजुभाइका सुख, दुःखमा मसँधै उहाँहरुकै साथमा छु । त्यसैले पनि मेरो आत्मविश्वास बढेको हो । हिजो एक समाजसेवी एवं नेपाली अगुवाको रूपमा उहाँहरूको माझमा थिएँ, अब एनआरएनको अध्यक्षको रूपमा उहाँहरूको माझमा जाने चाहना छ । अमेरिकाको एनआरएनलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउने योजना छ । किनकि बौद्धिक जमातको बसोबास रहेको अमेरिकाको एनआरएन अन्य देशको तुलनामा कुन अवस्थामा छ, त्यो तुलना तपाईँहरूले नै गर्दा पनि थाहा पाउनुहुन्छ । त्यसैले तपाईँ, हामी सबै मिलेर एनआरएन अमेरिकालाई नमुनायोग्य बनाउँ । एनआरएन हाँक्न सक्ने उम्मेदवारका रूपमा धेरैले मप्रति विश्वास देखाइदिनुभएको छ। त्यही नै मेरो आत्मविश्वास हो । धेरैजसो बौद्धिक वर्गका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु बसेको यो देशमा उहाँहरूले सही उम्मेदवार छान्नुहुन्छ भन्ने मैले लिएको छु । उहाँहरूले परिवर्तन चाहनुभएको छु, त्यो परिवर्तन मबाट सम्भव छ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु ।
म दुई वर्षभित्र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई एनआरएनको सदस्य हुँदा गर्व गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने योजनामा छु । म आफू सुरुदेखि भिडेर लागेको छु । म जित्नेमा सुनिश्चित रूपमा उहाँहरुबाट विभिन्न खालको सहयोग र सल्लाह लिइरहेको छु । त्यसैले पनि उत्साहित छु, विजयी हुनेमा । दैनिक नेपालबाट साभार
Published on June 22, 2017 at 6:37 pm
आफू माथि लागेका आरोपमा पहिलो पटक बोले । किन आँसु झारे धुर्मुस सुन्तलिले ?
जीवनको अर्को नाम ‘संघर्ष’ रहेछ – सौन्दर्य व्यवसायी शुशिला चुडाल गौतम (अन्तरवार्ता)
संयन्त्रमा बांधिने एनआरएन अमेरिका बनाउन भूमिका खेल्नेछु – एनआरएन अमेरिका, वरिष्ठ उपसभापती पदका प्रत्याशी सुनिल शाह
ह्लाइल इन काठमाण्डूका विकास खरेल
पर्दामा झमक घिमिरे, वास्तविक जीवनमा भौतिकशास्त्रकी विधार्थी: रोजिता बुद्धाचार्य
झुकिनुहोला स्वान फ्लु कि बर्ड फ्लु ? डा. बुद्धिबहादुर थापाको सल्लाह
Interview with Purna Baniya
मैले आँटेको कुरा पुरा गर्न कहिले सम्झौता गर्दिन : जेदु पोखरेल ,एनआरएन अमेरिकाका उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी
बिआरटी नेपालका मेनेजिङ डाइरेक्टर राम लामा “अविनाशी”संग रेडियो हिमालयले लिएको अन्तर्बार्ताको अडियो रेकर्डिङ
म आशावादी छु, मतदाताहरुले साथ दिनु हुनेछ: गौरी जोशी
एन आर एन उपाध्यक्ष उमेम्द्वार उमा कार्कीसंग गरिएको छोटो कुराकानी
कसले हो कसले बिचरी मेरी छोरीलाई झाडी तिर लगेर कानको मुन्द्री खोसेर लगेछ